Dog Group Cries "Wolf!"
Dog Lovers Slam Subang Jaya Municipality
Daftar pemilih: JPN, SPR jangan 'pekak badak'
"Sehingga hari ini masih ada lagi kes-kes yang meragukan di dalam daftar pemilih dan ianya akan terus dibongkarkan oleh Jabatan Pilihanraya Dewan Pemuda PAS Malaysia," kata Ketua Pengarahnya, Mohd Sany Hamzan.
"Selain itu, Jabatan Pilihanraya Dewan Pemuda PAS Malaysia mengarahkan kepada jentera pilihanraya di peringkat pemuda negeri dan kawasan-kawasan untuk melakukan semakan terhadap pengundi-pengundi sedia ada dan melaporkan sekiranya berlaku kes-kes yang meragukan supaya dapat diambil tindakan segera," ujarnya lagi. -HD
Posted: 18 May 2012 07:18 AM PDT
Spain colonized and converted the MALAYS (some Muslim, some Hindu, some Buddhists and some wild nat believers) into Christianity. But most of the Malays in southern Philippines remained Muslims. It is not Myanmar Muslim problem. You need to angry Christian Spains for converting Philippine Buddhists. Don't write anti-Muslim even without knowing the history. Don't blame Myanmar Muslims.
Southern Thai Muslims own the lower Thai. Thai Buddhists had colonized them. This is neither the BAMA BUDDHIST problem nor Myanmar Muslim's fault. This is just political problem and nothing to blame Islam for the violence. For me I wish them peaceful coexistence and HOPE that with ASEAN Community Integration, people could just easily migrate and stay anywhere. Stop using WRONG facts to attack Myanmar Muslims. Division of India, Pakistan, Bangladesh ….Actually because of the British Colonists only the peaceful coexistence of Hindus and Muslims under Muslim Mogul Empire disappeared. Even the Hindus and Muslims rebelled against British with the last Mogul King Shah Zafar. So he was exiled to Rangoon and even his dead body was denied to bring back to India. In India, Buddhists/Hindus/Muslims were killing each other based on POLITICS to get power. Even Mogul Muslims killed Iran-Afghan-Indian Delhi Kingdom. Don't mix up politic with religion and blame Islam. Bama Mahabandoola had massacred millions of Buddhist Ahons in Manipur. Asoka had massacred millions of Hindus. Bama kings had massacred Rakhine Buddhists and Thai Buddhists. Don't use history to hit Myanmar Muslims. Just look at the Bama Buddhists in Kachin, Karen and Shans. Bama Buddhists had massacred Buddhist Mons. So why you are blaming Myanmar Muslims using history.
Do you know that Buddhist Rakhine King Shujaha massacred the elder son of Shah Jahan (Taj Mahal builder) , queen, royal family and followers had led to invasion of Mogul King Aurangzeb of Arakan and end that Arakan Kingdom. Do you know about Muslim conquerors left behind and staying in Rakhin since then?
I wrote this in rebuttal to the RACIST Instigator Kaung Khant Kyaw's posting.
"""အရမ်းအရေးကြီးပါတယ် မြန်မာလူမျိုးအားလုံးကို Share ပေးကြပါ"""
ဟိုးတချိန်တုန်းက အလွန်ကြီးမားတဲ့ India နိုင်ငံကြီးဆိုတာရှိတယ် အဲဒီနိုင်ငံမှာ ဘာသာပေါင်းစုံ ညီညွတ်စွာနေထိုင်တယ်
ဒါပေမဲ့ မွတ်ဆလင် အာရပ်အချို့ ဝင်ရောက်လာပြီးတဲ့ အခါမှာတော့ အခြေအနေပြောင်းလဲသွားတယ် အဲဒီဒေသမှာ
တခြားဘာသာဝင်တွေ နေလို့မရအောင် နည်းမျိုးစုံသုံးပြီး အနှောက်အရှက် ပေးခဲ့ကြတယ် သတ်ဖြတ်မှု ဓားပြမှု
မုဒိမ်းမှု တွေနဲ့ တခြားဘာသာဝင်တွေ ဟာ လုံခြုံမှုမရှိတာကြောင့် ကိုယ့်မွေးရပ်မြေကို စွန့်ခွါခဲ့ကြတယ်
ကြာလာတော့ အဲဒီ India နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာ မွတ်ဆလင်လူမျိုးတွေပဲ ကျန်တော့တယ်
အဲဒီတော့နိုင်ငံခွဲထွက်ခွင့် တောင်းတော့တယ် India အစိုးရက အစပိုင်းမှာ ခွဲထွက်ခွင့်မပေးပါဘူး
မွတ်ဆလင်တွေက ပြည်သူတွေကို တရစပ် အကြမ်းဖက်မှု ဗုံးထောင်ဗုံးခွဲမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်
အစိုးရကလဲ ပြည်သူတွေ အန်ဒရယ်ဖြစ်မှာစိုးလို့ နိုင်ငံခွဲထွက်ခွင့်ပြုလိုက်ရတယ်
အဲဒီကနေ ပါကစ်စတန်နိုင်ငံနဲ့ ဘင်းဂလားဒေ့နိုင်ငံဆိုပြီး ခွဲထွက်ခဲ့ကြတယ်
အဲဒီနောက် ထိုင်းနိုင်ငံ တောင်ပိုင်း
သတ်ဖြတ်မှုတွေ တရစပ် အကြမ်းဖက်မှု ဗုံးထောင်ဗုံးခွဲမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်
အဲဒီနောက် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း
မနီလာ မြို့တော်ထိအောင် တရစပ် အကြမ်းဖက်မှု ဗုံးထောင်ဗုံးခွဲမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်
ဘူးသီးတောင် မောင်းတော စတဲ့ရခိုင်မြို့တွေကို
နောက် နိုင်ငံခွဲထွက်ခွင့် ………………….
Posted: 18 May 2012 08:38 AM PDT
"Perjanjian itu dilakukan ketika Najib menjadi Menteri Pertahanan dan perhatian difokuskan kepada peranan yang dimainkan oleh rakan rapat Najib dan penasihat dasar, Abdul Razak Baginda," laporan itu dipetik.
"Mereka merayu keputusan itu, tetapi perbicaraan ditangguhkan. Ramai meramalkan rayuan tidak akan didengar selepas pilihan raya yang dijangka pada Jun (ini)," kenyataan itu dipetik.
(၁) ၁၉၅၄ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၂၅) ရက်နေ့ ည ၈ နာရီအချိန် – နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနု၏အသံလွှင့်မိန့်ခွန်းတွင် မောင်းတောနှင့်ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်များတွင်နေထိုင်လျက်ရှိသော ပြည်ထောင်စုသားများသည်များသောအားဖြင့် ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသားဖြစ်ကြသည် ပြောကြားခဲ့သည်။
(၂) နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးဗဆွေမှ ၁၉၅၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၃) ရက်နှင့် (၄) ရက်နေ့များတွင် ဘူးသီးတောင်နှင့်မောင်းတောမြို့လူထုအစည်းအဝေးများတွင် ရိုဟင်ဂျာများသည် ကချင်၊ ကရင်၊ ကယား၊ ရှမ်း၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ချင်းတိုင်းရင်းသားကဲ့သို့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတခုဖြစ်ကြောင်းမိန့်ခွန်းတွင်ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
(၃) နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ရုံးလက်အောက်နယ်ခြားဒေသအုပ်ချုပ်ရေးရုံး ကြေငြာချက် (ရက်စွဲ – ၂၀.၁၁.၆၁) တွင်မေယုဒေသအတွင်းနေထိုင်ကြသူများသည်တိုင်းရင်းသားရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများဖြစ်ကြောင်းပါရှိသည်။ (မေယုဒေသ = ယခုမောင်းတောခရိုင်)
(၄) ၁၉၆၁ မေလ (၁၅) ရက်နေ့မှစ၍ ၁၉၆၅ မတ်လအထိ မြန်မာ့အသံတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဘာသာစကားအစီအစဉ်တွင် တပတ်လျှင် (၁၀) မိနစ်ကျစီ (၃) ကြိမ်၊ ညနေ ၅း၃၀ နာရီတွင် ရိုဟင်ဂျာဘာသာစကားဖြင့်အသံလွှင့်ပေးခဲ့ပါသည်။ (နှစ်သုံးဆယ် မြန်မာ့အသံ – ဦးကျော်ငြိမ်း မာတလိ)
(၅) စာပေဗိမာန်ထုတ် မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း၊ အတွဲ (၉) စာမျက်နှာ ၈၉-၉၀ တွင် ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် ရခိုင်တိုင်းမြောက်ပိုင်း မေယုခရိုင်တွင် လူဦးရေ (၅၀၀၀၀၀) ငါးသိန်းခန့်ရှိပြီး ၇၅%သည် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများဖြစ်သည် ဟူ၍အကျယ်တ၀န်းရေးသားဖော်ပြထားသည်။
(၆) ကာကွယ်ရေးဌာနမှထုတ်ဝေသော တပ်မတော်ခေတ်ရေးစာစောင် အတွဲ (၁၂) အမှတ် (၆) (၁၈.၇.၆၁) နှင့် (၈.၈.၆၁) နေ့ထုတ် အတွဲ (၁၂) အမှတ် (၉) တို့တွင်မေယုခရိုင်၊ မောင်းတော၊ ဘူးသီးတောင်၊ ရသေ့တောင်အနောက်မြောက်မြို့နယ်များတွင်အများစုအားဖြင့် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများနေထိုင်ကြပြီး၊ လူနည်းစုမှာ ရခိုင်၊ ဒိုင်းနက်၊ မြို၊ ခမီ စသောလူနည်းစုများစွာပါဝင်နေထိုင်သည့်ခရိုင်ဒေသတခုဖြစ်ပါသည် ဟူ၍ဖော်ပြပါရှိပါသည်။
(၇) ဒုတိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း) ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်ကြီး၏ (၈.၇.၆၁) ပြောကြားသောမိန့်ခွန်းတွင် "ကျွန်ုပ်တို့ ဒီခရိုင်မှာနေထိုင်တဲ့လူတွေကို ရိုဟင်ဂျာလို့ခေါ်ပါတယ်။ မေယုခရိုင်၏ အနောက်ဘက်တွင် ပါကစ္စတန် (ယခုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်) ရှိပြီး မွတ်ဆလင်များနေကြပါတယ်။ အနောက်ဘက်မှာနေသူများကို ပါကစ္စတန်ဟုခေါ်ပြီး၊ မြန်မာပြည်မှာရှိသူများကို ရိုဟင်ဂျာလို့ခေါ်တယ်။ မြန်မာ၊ ပါကစ္စတန်နယ်စပ်တခုတည်းမှာသာ လူမျိုးတမျိုးတိုင်းပြည်ခြား၍ နေကြသည်မဟုတ်၊ တရုတ်နှင့်ဆက်စပ်နေသော နယ်စပ်တွင်လည်း ဤသို့လူမျိုးချင်းဆက်စပ်နေကြသည်။ ဥပမာ – ကချင်မှာ လီဆူး၊ အီကော၊ လ၀ စသည့်လူမျိုးများရှိသလို တရုတ်ပြည်တွင်လည်း ၄င်းလူမျိုးများရှိသည်။ ထိုနည်းတူ မြန်မာပြည်တွင်းရှိ ရှမ်းလူမျိုးများရှိသလို တရုတ်ပြည်တွင်လည်း တိုင် ဆိုသောရှမ်းလူမျိုးများရှိကြပါသည်။ မြန်မာပြည်တွင် မွန်၊ ကရင်၊ မလေးရှိသလို ယိုးဒယားဘက်တွင်လည်း ထိုလူမျိုးများရှိကြပါသည်။ အိန္ဒိယ-မြန်မာနယ်စပ်တွင်လည်း ချင်း၊ လီရှော၊ နာဂလူမျိုးများ မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိသကဲ့သို့ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလည်းရှိကြသည်။ အဲဒီတော့ ဒီနေ့ဒီအချိန်ကစပြီး ကျွန်တော်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောချင်တယ်။ မေယုခရိုင်ကို ပြည်ထောင်စုထဲမှာရှိတဲ့ လူနည်းစုတစုလို့သဘောထားမယ်။ အဲဒီတော့အရင်တုန်းက ကျွန်တော်တို့မှားခဲ့တာတွေရှိရင် ခင်ဗျားတို့အားလုံးမေ့ကြ၊ ဒီအချိန်ကစပြီး ခင်ဗျားတို့မေယုခရိုင်က လူတွေဟာ တို့ဗမာပြည်ထောင်စုသား၊ တို့ဗမာပြည်ထောင်စုထဲက လူမျိုးစုတစုလို့သဘောထားကြပါ။ " စသည်ဖြင့် အကျယ်တ၀န့်ပြောကြားခဲ့သည်။
(၈) ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ၁၉၇၈ ခုနှစ်ထုတ်မြန်မာနိုင်ငံအထက်တန်း ပထ၀ီဝင်ဖတ်စာအုပ်၊ စာမျက်နှာ ၈၆ တွင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများပြန့်နှံ့နေထိုင်ကြပုံပြရာမှာ ရခိုင်မြောက်ပိုင်းဒေသကို ရိုဟင်ဂျာ များနေထိုင်ရာဒေသအဖြစ်ပြသထားပါသည်။
(၉) ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် ရိုဟင်ဂျာကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူအသင်းအဖွဲ့လည်းထူထောင်ခွင့်လျှောက်ထားခဲ့ရာ ၃.၁၂.၅၉ ရက်စွဲပါ မှတ်ပုံတင်အမှတ် ၁၁၂/၅၉ ဖြင့် "This is to certify that Rangoon University Rohingya Student Association is one of the Registered Associations of the University of Rangoon for the academic year 1959-1960" ဟူ၍မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရရှိခဲ့သည်။
(၁၀) ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်တွင် ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ရိုဟင်ဂျာရိုးရာယဉ်ကျေးမှုပြပွဲကို သိမ်ဖြူအားကစားပြိုင်ဝင်းအတွင်းကျင်းပပေးခဲ့ရာ ရိုဟင်ဂျာယဉ်ကျေးမှုပြပွဲတခုဖြစ်သော ကျင် ပွဲကိုပြသခွင့်ရရှိခဲ့ပါသည်။
(၁၁) မြန်မာအသံ (၂၅) နှစ်မြောက်ငွေရတုသဘင်အဖြစ် ၁၉၇၁ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် သောတရှင်မဂ္ဂဇင်းကိုထုတ်ဝေခဲ့ရာ စာမျက်နှာ ၅၅ တွင် ၁၉၄၇ ခုနှစ်မှစ၍ တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားအဖြစ်စတင်အသံလွှင့်ခွင့်ပြုသည့်ရက်စွဲများကိုဖော်ပြရာတွင် ၁၉၄၇ တွင် ရှမ်းနှင့်ကချင်ဘာသာ၊ ၁၉၄၉ တွင်စကောကရင်နှင့် ပိုးကရင်ဘာသာ၊ ၁၉၅၉ ခုနှစ်တွင် ချင်းဘာသာ၊ ၁၉၆၁ တွင် မွန်၊ ပအို့၊ လားဟူ၊ ရိုဟင်ဂျာနှင့်ကယား ဘာသာတို့အသံလွှင့်ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားသည်။ မွန်၊ ပအို့၊ လားဟူ၊ ရိုဟင်ဂျာ ဘာသာတို့ဖြင့်အသံလွှင့်ခွင့်ကို ၁၅.၅.၆၁ နေ့မှစ၍ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး ၁.၁၀.၆၅ နေ့တွင်ရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။
(၁၂) ၁၉၆၀ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုနေ့တိုင်းရင်းသားရိုးရာယဉ်ကျေးမှုပြပွဲကို အောင်ဆန်းအားကစားကွင်းတွင် နိုင်ငံတော်မှကျင်းပခဲ့ရာ ရိုဟင်ဂျာရိုးရာကျင်ပွဲခေါင်းစဉ်ဖြင့် တခမ်းတနားကျင်းပခွင့်ပြုခဲ့သည်။
(၁၃) ၂၀.၁၁.၆၀ နေ့ထုတ်မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင် နယ်ခြားဒေသအုပ်ချုပ်ရေးရုံးမှ နယ်ခြားဒေသအုပ်ချုပ်ရေးအရာရှိ ရခိုင်တိုင်းမင်းကြီးနှင့်အဖွဲ့ဝင်များ မေယုနယ်ခြားခရိုင်သို့ရောက်ရှိခဲ့ကြရာ ရိုဟင်ဂျာများမှလှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုကြကြောင်း၊ သူရသတ္တိရှိသူများဖြစ်ကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးကို မြတ်နိုးလိုလားပြီး သစ္စာရှိသောစိတ်ဝင်စားဖွယ် ပြည်ထောင်စု၏လူမျိုးတမျိုးဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည့်အပြင် မြန်မာ့အသံ (ရေဒီယိုအစီအစဉ်)မှလည်း ထိုအကြောင်းအရာကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။
(၁၄) ၁၈.၇.၆၁ ရက်နေ့ထုတ် တပ်မတော်ခေတ်ရေးစာစောင် အတွဲ (၁၂) အမှတ် (၆) စာစောင်တွင် "မေယုနယ်မှလေ ဘယ်လိုအခြေရှိပါလိမ့်" ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ရေးသားခဲ့သည်။ ထိုဒေသ၏ လူအများစုသည် ရိုဟင်ဂျာဖြစ်ကြောင်းရေးသားခဲ့သော ဆောင်းပါးဖြစ်သည်။
(၁၅) ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေးနှင့်စိတ်ဓါတ်ရေးရာညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး ၁၉၆၁ ခုနှစ်တွင်ထုတ်ဝေခဲ့သော တပ်မတော်ခေတ်ရေးစာစောင် (၂) စောင်အနက် ၈.၈.၆၁ နေ့ထုတ် အတွဲ (၁၂) အမှတ် (၉) တွင် "ပျောက်ဆုံးနေသော ညီအစ်ကိုတစ်ဦးကို ရှာတွေ့သည့်ပမာနှယ်" ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဘူးသီးတောင်၊ မောင်းတောတွင် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး ၉၇% ရှိကြောင်းရေးသားခဲ့သည်။
Posted: 18 May 2012 05:58 AM PDT
We have received enquiries from animal lovers in Petaling Jaya, Selangor, asking about the safety of their pets this weekend.
An urgent notice is being sent out by an animal group, which, we must add, unfortunately hasapenchant for making up and sensationalising stories, claiming "a reliable source" saying that the Petaling Jaya City Council (MBPJ) is "embarking onadog
Posted: 18 May 2012 06:36 AM PDT
Kuala Krai: Mesyuarat Agung Tahunan PAS kali ke-34 di sini mencatat sejarah apabila 50 anggota Umno Kampung Sungai Tias, dekat sini menyerah borang menyertai PAS kepada Presiden PAS, Dato' Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang.
Penyerahan borang tersebut dilakukan Wan Nor Abdullah, 46 mewakili rakan-rakan lain. Pada majlis itu juga Presiden memakaikan baju-T bergambar Tuan Guru Dato' Nik Abdul Aziz Nik Mat.
"Mereka sanggup mencaci ulama sedang mereka sendiri tidak betul," katanya kesal.
Kata beliau bekas Adun Dabong, Dato' Ramzi Abdul Rahman bukan orang Dabong dan hanya datang sekali sekala biarpun mempunyai banglo mewah di atas bukit di Jelawang.
"Sedangkan Adun sekarang orang tempatan dan mudah ditemui. Arif sering keluar masuk kampung menemui rakyat tanpa mengira parti.
"Inilah yang menyebabkan saya dan kawan-kawan mengambil keputusan keluar Umno dan menyertai PAS,"tambahnya.
"Alhamdulillah melalui program yang diadakan sejak beberapa tahun lalu berjaya mendekatkan PAS dan penyokong-penyokong Umno sehingga ada yang membuat keputusan menyertai kita," katanya.
Sementara itu, Ustaz Abdul Hadi berkata, biarpun ada pihak cuba mempertikaikan bekas Presiden Majlis Peguam, Dato' S Ambiga mengetuai Bersih 3.0, namun bagi PAS persamaan perjuangan bagi membersihkan pengendalian pilihan raya di negara ini lebih penting.
"Tak kiralah siapa yang berada di depan Bersih 3.0 baru-baru ini, kerana apa yang lebih penting berjuang memastikan pilihan raya benar-benar bersih dan adil," katanya ketika merasmikan mesyuarat agung tersebut.
"Kerana tamak kuasa Umno sanggup mencanangkan fahaman tersebut, seolah-olah mereka pemberi rezeki kepada rakyat. Umno terus mendabik dada," ujarnya.
Turut hadir pada mesyuarat agung di Putik itu, Penolong Setiausaha Agung PAS, Dato' Takiyuddin Hassan, anak bekas Tun Ghaffar Baba, Tamrin Ghafar dan rombongan PAS Kuala Kangsar.
Ruj Kami : ( 55)MBPJ/090100/T/M13 Jld.5 Tarikh : 14 Mei 2012 En. Brian Martin Star Metro Editor Star Publication (M) Bhd Menara Star, 15 Jalan 16/11 46350 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan Tuan, MERUJUK ARTIKEL "CONDUCT PROBE ON COUNCILLORS, SELANGOR DAP TOLD" Dengan hormatnya merujuk kepada artikel di atas yang ditulis oleh wartawan A. Letchumanan yang disiarkan di akhbar The Star
Posted: 18 May 2012 02:39 AM PDT
Posted: 18 May 2012 02:04 AM PDT
Posted: 18 May 2012 04:25 AM PDT
Posted: 18 May 2012 01:03 AM PDT
Posted: 18 May 2012 12:43 AM PDT
Posted: 17 May 2012 11:52 PM PDT
Everything Will Come To All Of Us If All We're Brave As It Should Be
It Is For Peace ,It's What We Need Be Peace Upon Our Blood
ဒီသီချင်းလေးကိုတိတ်ခွေထဲထည့်ဖို.ရေးပေးပြီး ဆိုမည့်သူတွေကိုလဲအသံထွက်တွေပြင်ပေးရတယ်။ဒီသီချင်းမှာ ပြဿနာမရှိပါဘူး။စစ်ချီသီချင်းတပုဒ်မှာသာစာသားပြောင်းခိုင်းလို.ပြဿနာတက်လာပါတယ်။ထုံးစံအတိုင်း မဆလ ထောက်လှမ်းရေးဆိုသူတွေရှုံးတာပေါ.။ အဲဒီသီချင်းက "နွေပင်လယ် ပူပူလောင် ငရဲမီးလျှံများ လွှမ်းပါစေ ရွ.ံကြောက်ဖို.မဖြစ်ပြီလေ ငရဲကောင်ရဲ.မာန်စွယ်ကို …နင်းခြေလို.ခြွေမယ်…လာပြီ ဇာနည် …. ညီ အကိုတွေ " အဲဒီမှာ သူတို.က ပူပူလောင်ကို ပူလောင်လောင်လို.ပြင်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်က အဲဒီ ဝါဒဖြန်.ချီရေးတာဝန်ခံ စောမြအောင်ကို "ပူပူလောင်ကသိပ်ပူပါတယ် မခံမရပ်နိုင်တဲ့ကိစ္စပါ ပူလောင်လောင် ဆိုတာက တအားပေါ.သွားတယ် ခွန်အားရှိတဲ့စာမဟုတ်ဘူး ဘာညာနဲ.ပြောတော့ "သူကပြန်ပြောတယ်….. "မင်းတို. Spy တွေသိပ်လျှာရှည်တယ်..မသတ်ပဲထားတာအေးအေးမနေဘူး …ဒီစကားလုံးကို ငါပြင်ချင်လို.ပြင်တာကွာ မင်းဘာလုပ်ချင်လဲ မင်းထပ်စကားမများနဲ. သေသွားလီမ့်မယ်" ဆိုပြီးပြန်ပြောတယ်။ ဒီသီချင်း ၆ ပုဒ်ပြီးတော့ခွေကြမ်းကို သံချောင်းကိုအပ်လိုက်တော့ ထုံးစံအတိုင်းကျောင်းသားအဖွဲ.ကထောက်လှမ်းရေးဆိုတဲ့သူတွေ ကိုပြတယ်။အဲဒီအထဲက အောင်စိုးမြင့်က ကျွန်တော်တို.တဲကိုရောက်လာပြီး "ခင်ဗျားတို. မဆလ ဗိုလ်တွေ တအားတော်တယ်ဗျာ..သီချင်း ၆ ပုဒ်ကိုဘာမှမကြာဘူး….ကျွန်တော်တို.လုပ်နေတာတအားခက်နေတာ…. အေးလေ အဲဒီလိုတော်လို.လည်း စပိုင်လုပ်ဖို. AB ထဲရောက်လာတာပေါ." တဲ့။ နောက်တယောက်ကတော့ လက်သီးပါ။ဟုတ်ပါတယ်။ဗန်းမော်က ဇော်ဝင်းချစ်ရဲ. ပေါင်သားကိုလှီးစားတဲ့အထဲပါတဲ့သူပေါ.။ကျွန်တော်တို. အကျယ်ချုပ်မဖြစ်ခင်ကျနော်တောင်ကုန်းပေါ်မှာထင်းခွဲနေတော့ထင်းကအမြက်ခံနေတာခွဲရတာအဆင်မပြေဘူး..အဲဒါကိုမြင်ပြီး သူပေးတဲ့ မှတ်ချက်လေးကိုကြည့်ပါအုံး.."ဟေ့ကောင်..ညီညီ ..မင်းဘဝအတွက် ငါရင် လေးတယ်ကွာ..နှီးလည်းမဖျာတက်…ကတ်လည်းမယက်တက်….ထင်းလည်းမခွေတက်……မင်းရှေ.လျှောက် ဘယ်လိုရပ်တည်မလဲ…" တကယ်ကိုသနားပြီးပြောသွားတာပါဗျာ…ဒါတွေကသီချင်းတွေအကြောင်းနဲ.အတူ သူတို.ရဲ.စိတ်ဓါတ်နဲ.အဆင့်အတန်းကိုသိရအောင်ရေးပြတာပါဗျာ…… သစ္စာတရားဖြင့် (ဆမား) ညီညီ မြေက်ပိုင်းရဲထော်ဟောင်း
Posted: 18 May 2012 02:22 AM PDT
Posted: 17 May 2012 10:14 PM PDT
MANY dog owners have critisised the Subang Jaya Municipal
Council (MPSJ) for its knee-jerk reaction in lumping six breeds under
the restricted category.
On Wednesday, the council said it
planned to stop issuing licences for restricted dog breeds after
Posted: 17 May 2012 11:09 PM PDT
"Kira-kira jam 7.00 malam, ketika melintasi Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD) Dang Wangi, motosikal saya diserbu lapan hingga 12 anggota polis berpakaian seragam.
"Saya tidak diberikan arahan supaya memberhentikan motosikal. Secara tiba-tiba, saya diserbu dan dikelilingi kumpulan polis berkenaan.
"Pada masa itu, saya memakai baju Bersih 3.0 tetapi ditutup dengan baju kemeja lain. Mereka memaksa saya menanggalkan baju kemeja, saya tidak melawan dan mengikut arahan mereka.
"Selepas menanggalkannya, polis berpangkat sarjan menarik baju Bersih 3.0 dan anggota lain terus memukul saya. Mereka menumbuk saya dan mengetuk kepala tanpa henti" katanya selepas membuat laporan di IPD Petaling Jaya, pagi tadi.
"Saya rela memberikan baju Bersih 3.0 yang saya pakai kalau itu yang mereka mahu. Saya beritahu mereka, saya dalam perjalanan pulang ke rumah. Namun, dengan tiada belas kasihan mereka memukul saya.
"Beg saya diselongkar dan dicampak ke tepi jalan. Selepas 15 minit dibelasah, saya diherdik supaya meninggalkan kawasan ini segera," katanya yang cedera di badan dan motosikalnya rosak.
"Saya sedih bukan disebabkan saya dipukul, tetapi sedih memikirkan sikap polis yang menggangap orang awam sebagai musuh dan bertindak samseng.
"Sikap inikah yang ditunjukkan pasukan keselamatan sedangkan mereka sepatutnya membela rakyat yang teraniaya, bukan menganggap sebagai musuh demi tunduk kepada pemerintah Umno BN," tegasnya.
Posted: 17 May 2012 08:49 PM PDT
DPM: We have already fulfilled Bersih's demands
Selepas Ambiga, 'senaman tarian' untuk Anwar pula
PETALING JAYA: Kelmarin kita diperkenalkan dengan gimik 'senaman punggung' oleh sekumpulan bekas tentera dari Persatuan Veteran Tentera Melayu (PVTM), bakal menyusul selepas ini satu senaman tarian yang diadakan khas untuk beberapa individu.
"Senaman tarian ini akan dibuat pada waktu terdekat dengan beberapa gimik menarik," katanya ketika dihubungi FMT.
"Tunggu dan lihat kita akan adakan satu tarian dahsyat. Senaman tarian ini lebih tajam dan akan dibuat di hadapan rumah mereka serentak dalam masa terdekat ini.
"Tujuannya siapa makan cili dia terasa pedasnya. Ia juga sebagai peringatan supaya jangan ulangi tindakan untuk merosakkan negara," katanya.
Sementara itu, beliau turut mempertahankan tindakan mereka yang membuat gimik 'senaman punggung' di hadapan kediaman pengerusi bersama Bersih, Datuk S Ambiga.
"Saya pertahankan bahawa senaman itu untuk jaga kesihatan dan apa yang kami lakukan tidak menyalahi undang-undang. Kami tidak buat dalam rumah beliau (Ambiga).
"Bukan kami tidak berpakaian sedangkan kami lengkap berpakaian kemas tempoh hari.
Kalau salah saya cabar Ambiga untuk ambil tindakan undang-undang pada saya. Hakim yang akan tentukan dan keputusan bukan di tangan Ambiga," ujar beliau. -FMT